2008-07-30 @ 10:09 in Sarimihetsika
Omaly alina vao hitako ilay Into the Wild na dia efa tamin'ny 2007 aza no nivoaka. Henoko ihany ny lazany fa noheveriko hahamonamonaina satria dia efa ho 150mn be izao. Nony nijery azy anefa aho alina dia tena nankafy tanteraka. Raha mbola tsy hitanareo dia mba jereo ihany.
Nahalasa saina lalina ilay tantara. Tamin'ny voalohany aho dia nanome rariny an'i Chris raha lasa niova ho Alex sy nankafy fahafahana amin'izay izy taorian'ny sarintsarim-pahasambarana niainany teo anivon'ny fianakaviany. Fa nony nandeha tsikelikely ilay tantara dia niombon-kevitra taminy koa aho tamin'izy ilay tonga saina ka nanoratra hoe "Ny fahasambarana tena izy dia ilay fahasambarana ifampizaràna amin'ny hafa" (nosoratany tao amin'ilay boky Happiness only real when shared). Ho inona tokoa moa ny fahasambarana raha tsy zaraina... ary indrindra indrindra tsy misy mahalala akory hoe sambatra ianao? Kanefa matetika dia fahasambarana toa izany hatrany no irian'ny maro iainana.
Azo itarina ilay izy mikasika ireo olona na vondron'olona izay mahafoy ny zavatra rehetra "Ray, reny, iray tam-po, izao rehetra izao" mba ho an'ny zavatra iray na olona iray. Raha toa ka fahasambarana ho azy no tadiaviny dia tena "into the wild" izy ka miaina fahasambarana irery... ary tsy mijery ny fahorian'izay nilaozany.
Toa lasa bedabe ny zavatra ho "mises en question" :-)
Hatramin'ny hoe "Handao ny ray aman-dreniny ra-lehilahy"...